အမေရိက ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်သည့် Hyundai Kona N ! – MyMedia Myanmar
အမေရိက ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်သည့် Hyundai Kona N !
Hyundai Kona N အတွက် Tease Video အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲ Facebook Post တစ်ခုလည်း ဆက်လက် ဖော်ပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ သေချာတာကတော့ အမေရိက ဈေးကွက် အတွက်တကယ့်ကို သတင်းကောင်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် Compact Performance Crossover ကားတစ်စီးကို ရှာဖွေနေတဲ့အမေရိကန်တွေ အတွက်တော့ အခွင့် ကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းတစ်ရပ်မှာဆိုရင် Kona N က တကယ်ကို ထူးခြား ကောင်းမွန်ပါတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ် N အမျိုးအစားက အမေရိက ဈေး ကွက်ကို ဝင်ရောက်လာမှာ ပါ ဆိုပြီး အတည်ပြု ပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ Video မှာတော့ Camouflage တွေ ဖုံးအုပ် ထားဆဲ ဖြစ်ကာ Pre-Production အဆင့်သာ ရှိထားသေးပြီး Full Racing Suit ကိုလည်း မျှော်လင့်လာနိုင်မယ့် အမျိုးမျိုးသော အခြေ အနေတွေကို မှန်းဆလို့ ရနေပါတယ်။
Video ရဲ့ အစမှာတော့ Stoplight Drag Race ပုံစံနဲ့ အစပြုပေးထားပြီး တစ်ဖက်မှာတော့ Performance Crossover တစ်စီးကို စိန်ခေါ် ဖို့ လုံးဝမရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပါဝင်တဲ့ Veloster ကားနဲ့ ယှဉ်ပြထားခဲ့တာပါ။ Video ထဲမှာတော့ အဆိုပါ အခန်း အပြီး ကားထဲက ထွက်ကာ Grocery Store ကို သွားတဲ့ပုံစံကိုလည်း ရိုက်ကူးပြထားသေးပြီး နောက်အခန်း တစ်ခန်းကတော့ ဆောင်းရာသီ အရမ်းအေးတဲ့ အခြေအနေ ထဲမှာမှ လေထန် တဲ့လမ်းမထက်မှာ မောင်းနှင်နေတဲ့ ပုံစံ ရိုက်ပြထား ပြန်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပဲ Video ရဲ့ နောက်တစ် ပိုင်းကတော့ လမ်းကြမ်း မောင်းနှင်ပြထားကာ နောက်ပိုင်းမှာ Camp ခရီးစဉ် ပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတာပါ။ Video ရဲ့ နောက်ဆုံး အပိုင်းလည်း ဖြစ်အရှည်ဆုံး အပိုင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ အခန်းမှာတော့ ပြိုင်ကား ပြေးလမ်း အပေါ်မှာ ရိုက်ပြထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Evo Magazine မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Profile ပုံ အရတော့ Kona N ဟာ 271 hp ( 207 KW ) နဲ့ 289 lb-ft ( 392 Nm ) Torque အထိ စွမ်းဆောင်ရည် ရှိတာ ဖြစ်ပြီး 2.0 Liter Turbocharged Four-Cylinder Engine ကိုလည်း အသုံး ပြုပေးထားတယ်လို့ သိထား ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Front-Wheel Drive စနစ်နဲ့အတူ Eight-Speed Dual-Clutch Gearbox ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားကာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နဲ့ ထိန်းချုပ် နိုင်မယ့် Limited-Slip Differential ကိုလည်း သုံးထားပြီး Traction စနစ်ကို ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ အတွက် တပ်ဆင်ထားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အချိန်တော့ Hyundai ဘက်ကနေ အဆိုပါကားရဲ့ Six-Speed Manual Version ကိုတော့ ဖော်ပြလာခဲ့ခြင်း မရှိသေးတာကို တွေ့ရ မှာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Kona N အမျိုးအစား သစ်မှာတော့ i30 N ဆီကနေ စတီယာတိုင်ပိုင်းနဲ့ အခြားသော Suspension စနစ် အပိုင်းတွေ ယူဆောင် အသုံး ပြုလာမယ်လို့ သိထား ရကာ မတူညီတဲ့ Tuning အပိုင်း တွေလည်း ရှိလာမှာ ဖြစ်သလို Hot Hatch တစ်စီးထက် Crossover ဆိုတာမျိုးနဲ့ပိုပြီး လိုက်ဖက်အောင် ပြင်ဆင်ပေးလာဖို့ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
01အခု Kona N အသစ် စီမံကိန်းမှာ Hyundai ဘက်ကနေ အဓိက ဖုံးအုပ်ပြီး လျှို့ဝှက် ထားတဲ့ အပိုင်းကတော့ကားရဲ့ အရှေ့ဘက် အစွန်း ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာပေါက် မြင်တွေ့ နိုင်တာ ကတော့ Mesh Grille အပိုင်း ဖြစ်ပြီး Concealment ထဲက မြင်တွေ့နေရတဲ့ အပေါက် တစ်ချို့ ကြောင့် ပိုကြီးတဲ့ Inlets တွေကို အစွန်းနှစ်ဘက်မှာ မြင်ရဖို့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ဆိုရင်တော့ ကြီးမားတဲ့ Wing ကြီးကို အမိုးနဲ့ ဆက်လျက် မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ကာ Diameter ကြီးကြီးနဲ့ အဝိုင်းပုံစံ အိတ်ဇောပိုက် တစ်စုံကိုလည်းထည့်သွင်း ပေး ထားသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ ကားရဲ့ အတွင်းခန်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပဲ i30 N နဲ့ ယှဉ်ကြည့် မယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမျိုး အတွင်းခန်း ပုံစံဆိုတာ ခန့်မှန်း ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အတွင်းခန်း တစ်ခုလုံးကို ခြုံကြည့်ရ မယ် ဆိုရင် ပုံမှန် Kona တွေကိုပဲ အခြေပြုလာမှာ သေချာပေမယ့် ပိုမို ပေါင်းထည့်လာနိုင်တာ တွေကတော့ Sport ဆန်ဆန် အပြင်အဆင်တွေ ၊ ထူထဲတဲ့ Bolster ထိုင်ခုံတွေနဲ့ အတူ ယခင် Version ထက်ပိုပြီး တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Material တွေကိုလည်းအတွင်းခန်းမှာ အသုံးပြု လာနိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အမေရိက ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်သည့် Hyundai Kona N ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-18T15:30:30+06:30January 18th, 2021|MYCARS MYANMAR|